ဗဟုသုတအထွေထွေ – Page2– media sport
[Zawgyi]ဒူးရင်း ဝယ် တဲ့ အခါ ဒီ အချက်(၃)ချက် ကို ကြည့်ပြီးေ ရွး ဝယ် ပါ။ ဒူးရင်းသီးဝယ်တိုင်းအဆင်မပြေလို့ဒူးရင်းသီးဝယ်ရင်ဘယ်လိုကြည့်ဝယ်ရတာလဲမေးလာလို့ ဒူးရင်းသီး ဘယ်လိုရွေးမလဲ ဒူးရင်းဝယ်တဲ့အခါ အချက်(၃)ချက်ကို ကြည့်ပြီးရွေးဝယ်ပါ။ (၁) ဒူးရင်းသီးရဲ့ဆူးတွေဟာတိုနေရပါမယ်။ (၂) ဒူးရင်းသီးရဲ့ ဆူးလိုင်းတွေဟာ ကျဲနေရပါမယ်။ (၃) ဒူးရင်းသီးရဲ့ အညှာဟာ ဖြောင့်တန်းနေရပါမယ်။ ဒီအချက်(၃)ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဒူးရင်းသီးတွေဟာ အနံ့၊ အရသာတွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ဒူးရင်းသီးကောင်းတစ်လုံးရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေပါပဲ။ ဒူးရင်းသီးမှည့် မမှည့်ဆိုတာ အချက်(၂)ချက်နဲ့ သိနိုင်ပါတယ်။ (၁) ဒူးရင်းသီးကိုနမ်းကြည့်ပြီး မှဲ့မမှဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ လှိုင်လှိုင်မွှေးနေပြီဆိုရင် အသင့်စားလို့ရနေပြီဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ o(၂) ဒူးရင်းသီးကို လှုပ်ခါကြည့်ရင်လည်း မှဲ့ မမှဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ မှဲ့နေပြီဖြစ်တဲ့ ဒူးရင်းသီးဟာအတွင်းကအဆံဟာ မသိမသာလေး ချောင်နေတာကိုသိထားရပါမယ်။ သတင်း
ဆေးကျောင်းသား/သူ ၆ယောက်ကို ဆရာဝန်ဖြစ်သည် ထိမြေတောင်မြှောက်ပေးခဲ့တဲ့သူ
ဆေးကျောင်းသား/သူ ၆ယောက်ကို ဆရာဝန်ဖြစ်သည် ထိမြေတောင်မြှောက်ပေးခဲ့တဲ့သူ.. ဆေးကျောင်းသားဆေးကျောင်းသူ၆ယောက်ကို ဆရာဝန်ဖြစ်သည်ထိ ၆နှစ်တာ မြေတောင်မြှောက်ပေးခဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ် လက်ရှိနာမည်ကျော် မင်းသားမင်းသမီးစုံတွဲ ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ မတည် ထူထောင်ထားသည့် ပြေတီဦးဖောင်ဒေးရှင်းက ဆေးကျောင်းသား ၆ ဦးကို ကျောင်းပြီးလို့ ဆရာဝန်ဖြစ်သည်အထိ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဟု သိရသည်။ နိုင်ငံအနှံ့အနယ်နယ်အရပ်မှ ထူးချွန်သူ ကျောင်းသား/သူများကို ပညာသင်စိတ် ထောက်ပံ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်မှာတော့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်က သူမ၏ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာတွင် ဆရာဝန်ဘွဲ့ရသူ စာရင်းနဲ့တကွ တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြေတီဦးပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်း ပထမဆုံးအသုတ်မှ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ(၆)ဦး၂၀၁၇ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ တွင် ဆရာဝန်ဘွဲ့ များရရှိသွားကြပါပြီ…..အရမ်းဂုဏ်ယူပါတယ်….အရမ်းပီတိဖြစ်ရပါတယ် နှစ်စ မှ နှစ်ဆုံးထိမဟုတ်ပဲ နှစ်တဝက်မှ ဖောင်းဒေးရှင်းသို့ ရောက်လာသော ကျောင်းသား ကျောင်းသူများထဲမှ
ဆေးကျောင်းသား/သူ ၆ယောက်ကို ဆရာဝန်ဖြစ်သည် ထိမြေတောင်မြှောက်ပေးခဲ့တဲ့သူ… ဆေးကျောင်းသားဆေးကျောင်းသူ၆ယောက်ကို ဆရာဝန်ဖြစ်သည်ထိ ၆နှစ်တာ မြေတောင်မြှောက်ပေးခဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ် လက်ရှိနာမည်ကျော် မင်းသားမင်းသမီးစုံတွဲ ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ မတည် ထူထောင်ထားသည့် ပြေတီဦးဖောင်ဒေးရှင်းက ဆေးကျောင်းသား ၆ ဦးကို ကျောင်းပြီးလို့ ဆရာဝန်ဖြစ်သည်အထိ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဟု သိရသည်။သိရသည်။ နိုင်ငံအနှံ့အနယ်နယ်အရပ်မှ ထူးချွန်သူ ကျောင်းသား/သူများကို ပညာသင်စိတ် ထောက်ပံ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်မှာတော့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်က သူမ၏ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာတွင် ဆရာဝန်ဘွဲ့ရသူ စာရင်းနဲ့တကွ တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြေတီဦးပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်း ပထမဆုံးအသုတ်မှ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ(၆)ဦး၂၀၁၇ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ တွင် ဆရာဝန်ဘွဲ့ များရရှိသွားကြပါပြီ…..အရမ်းဂုဏ်ယူပါတယ်….အရမ်းပီတိဖြစ်ရပါတယ် နှစ်စ မှ နှစ်ဆုံးထိမဟုတ်ပဲ နှစ်တဝက်မှ ဖောင်းဒေးရှင်းသို့ ရောက်လာသော ကျောင်းသား ကျောင်းသူများထဲမှ
အပ င်ေ တွ ဘယ်လောက် များေ နေ ပ မယ့် လည်း သစ်ရွက် တရွက် မှ ကန်ထဲမှာ မ ရှိ တဲ့ ဘုရားရှင် ကိုယ်တော် လက်ဆေး ခဲ့ေ သာ လက်ဆေး ကန် ================= ကလေးမြို့၏ ထူးဆန်းထွေလာ အံ့သြဖွယ်ရာ လက်ဆေးကန်သည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အထက် အမြင့် ၃ဝ၆၉ ပေ မြင့်သော တောင်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည့် ရေကန်ဖြစ်ပြီး မော်လိုက်ခရိုင်နှင့် ကလေးခရိုင် နယ်စပ်နေရာ တွင် တည်ရှိကာ ကလေး-တမူး မြန်မာ-အိန္ဒိယချစ်ကြည်ရေးကားလမ်းမကြီးဘေး ကလေးမြို့နယ် ရန်မျိုးအောင်ကျေးရွာအနီးမှ ပြောင်ဘုတ်-မော်လိုက်လမ်းအတိုင်း ၁၄ မိုင်ခန့်တောင်တက်ခရီးသွားကာ မော်လိုက်မြို့မှ ၁၉ မိုင်ဝေးသည့် နေရာတွင် တည်ရှိသည်။ မြတ်ဗုဒ္ဓငါးဝါအရတွင် ချင်းတွင်းမြစ်အထက်ပိုင်း
ဒီ ပို့ ကို တွေ့ ခွင့် ဖတ် ခွင့် ရ သူ တိုင်း မိမိ သည် မဟာ ကံထူး ရှင်ဖြစ်ေ နကြောင်း သိခွင့် ရ ပါ လိမ့် မည်… ကံထူးရှင်တိုင်း ဒီပို့ကိုတွေ့ ခွင့်ရပြီး ဖတ်နိုင်ရှဲနိုင်ပါလိမ့်မည် ဖတ်သွား ရှဲသွားသူတိုင်း ကမ္ဘာမှာ သန်းပေါင်းများစွာသော လူများထက် ကံကောင်းသောသူ ဖြစ်နေပြီဆိုတာ ဖတ်သွားသူတိုင်း သိသွားပါပြီ..။ သင့်​ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ စားစရာရှိနေတယ် ။ ခါးကိုအလှဆင်ဖို့ရာ အဝတ်အစားတွေရှိနေတယ် ။ သင့်ခေါင်းပေါ်မှာ ခေါင်မိုးတစ်ခုရယ် … နောက်ကျောခင်းအိပ်စရာ နေရာတစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုရင်သင်ဟာ ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေထက် ပိုမိုချမ်းသာပါတယ် ။ သင့်​ ဘဏ်ထဲမှာရော သင်​
ဒီ ပို့ ကို တွေ့ ခွင့် ဖတ် ခွင့် ရ သူ တိုင်း မိမိ သည် မဟာ ကံထူး ရှင်ဖြစ်ေ နကြောင်း သိခွင့် ရ ပါ လိမ့် မည် ကံထူးရှင်တိုင်း ဒီပို့ကိုတွေ့ ခွင့်ရပြီး ဖတ်နိုင်ရှဲနိုင်ပါလိမ့်မည် ဖတ်သွား ရှဲသွားသူတိုင်း ကမ္ဘာမှာ သန်းပေါင်းများစွာသော လူများထက် ကံကောင်းသောသူ ဖြစ်နေပြီဆိုတာ ဖတ်သွားသူတိုင်း သိသွားပါပြီ..။ သင့်​ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ စားစရာရှိနေတယ် ။ ခါးကိုအလှဆင်ဖို့ရာ အဝတ်အစားတွေရှိနေတယ် ။ သင့်ခေါင်းပေါ်မှာ ခေါင်မိုးတစ်ခုရယ် … နောက်ကျောခင်းအိပ်စရာ နေရာတစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုရင်သင်ဟာ ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေထက် ပိုမိုချမ်းသာပါတယ် ။ သင့်​ ဘဏ်ထဲမှာရော သင်​
သင့်ကို ကျိန်းသေပေါက် သေစေနိုင်တဲ့ …. ကမ္ဘာ့အဆိပ်အပြင်းဆုံး အပင် ( ၉ ) ပင် ￼ အရမ်းလှသလို အဆိပ်လည်းအရမ်းပြင်းတဲ့အပင်တွေပါပဲ ။ လှပတယ် ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေကို အပင်တွေကို ဖော်ကျူးရာမှာသုံးလေ့ရှိတယ် ။ ထို့အပြင် အိမ်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ သက်ရှိတွေရဲ့ရုပ်လုံးကြွ ရုပ်ထုများနဲ့ အဆင်တန်ဆာများကိုလည်း အခုလိုစကားလုံးတွေသုံးပြီးဖော်ပြလေ့ရှိတယ် ။ ဒီလိုလှပပါတယ်ဆိုတဲ့အပင်တွေထဲတစ်ချို့ဟာ လူသားတွေအတွက်ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်ပေးပေမယ့်လည်း တချို့အပင်တွေကျတော့လည်းအပြင်းဆုံးအဆိပ်ကိုထုတ်လုပ်ပေးကြတယ် ။ ပြောရရင်လူတစ်ယောက်ကိုသေသွားစေနိုင်တဲ့အပင်တွေကမ္ဘာပေါ်မှာအများအပြားရှိပါတယ် ။ အရမ်းကိုအန္တရာယ်များပြီးတော့ ဝေးဝေးကရှောင်သင့်တဲ့အပင်တွေပါပဲ ။ မဟုတ်ပဲ အနီးသွားခဲ့ရင်တော့ နောက်ဆုံးအချိန်ဆိုတာကို သဘောပေါက်သွားရပါလိမ့်မယ် ။ အခုကျွန်တော်တို့ပြသမှာကတော့ အဆိပ်အပြင်းဆုံးဆိုတဲ့အပင်တွေပါပဲ ။ တစ်ချို့ကတော့ လူသိများတဲ့အပင်တွေဖြစ်ကြပေမယ့် တချို့ကျတော့လည်း အရမ်းရှားပါးလွန်းတဲ့အပင်တွေဖြစ်ပါတယ် ။ ၁. Monkshood , Wolfsbane လို့သိကြတဲ့ Aconitum